Hong Kong : Koropaka fa tsy ampy ny vovo-dronono ho an-jazakely · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Elodie Belbeoc'h
Voadika ny 18 Marsa 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Français, 日本語, Español, Ελληνικά, македонски, English
Efa nanomboka tamin'ny raharaha momba ny ronono voapozina tamin'ny mélanine[amin'ny teny anglisy]tamin'ny taona 2008 ny antony lehibe nahatonga ny tsy fahampian'ny ronono vovony. Nanomboka hatreo, nipoitra matetika tao Shina ny raharaha manodidina ny fiarovana ny ronono.
Ohatra vao haingana ny nahitana taha-pitomboan'ny tsiri-panentana (hormone) ao anaty rononon-jazakely [amin'ny teny frantsay] tamin'ny taona 2010 ary ny raharaha tamin'ny volana febroary taona 2011 momba ny fifindran'ny akora-dronono amin'ny taharo shimika mampisy homamiadana ampiasaina amin'ny fitsaboana hoditra [amin'ny teny anglisy].
Manoloana ny tsy fahampian'ny rononon-jaza, nanao fanangonan-tsonia ireo ray aman-dreny efa tezitra ao Hong Kong ary niantso mba hampiharina amin'ny volana janoary 2011 ny fampidirana haba amin'ny fivoahan'ny ronono vovony ho an-jazakely. fionali3721 [amin'nyteny shinoa] no mpanentana momba ny fanangonan-tsonia ao amin'ny takelaka fiadian-kevitra Baby Kingdom [ny fanjakan'ny zazakely]:
Etsy andaniny, mahatsiaro tsy manana hery sy malahelo ireo ray aman-dreny ao Hongkong manoloana ny tsy fahampian'ny ronono, etsy ankilany, mahatsapa fiaraha-miory amin”ireo mitovy miny ao Shina kaontinantaly koa izy ireo izay voa mafy amin'ny tsy fandraisan'andraikitry ny governemanta. XsQsMe ao amin'ny serasera fiadian-kevitra Review33 nitsikera :
Mampalahelo izay tsy izy ny miaina eo ambanin'izany rafitra politika izany: mandany vola amina miliara ho an'ny lalao olaimpika sy ny tetikasa [sinoa nasionaly] ho an'ny habakabaka, mamokatra akora tsy izy , atody namboarina tamin'ny SoPhone (nifototra tamin'ny iPhone) , nefa tsy nahomby ny fiompiana omby mba [ hamokatra] ronono ka mamela ny zanany hijaly. Ny firenena an-dalam-pandrosoana dia hijanona foana ho firenena an-dalam-pandrosoana !
Fantatra fa ny ronono dia vokatra ilain'ny zazakely isan'andro, manohy mizara vaovao sy paikady amin'ny fomba hividianana ronono madio ho an'ny zaza ny ray aman-dreny ao Shina kaontinantaly . Green tea Chestnut Cake ao Guangzhou Moms dia nampandre ireo mpamaky gazety amin'ny fametrahana ny anjara fividianana ronono ao Hong Kong sy Macau:
Manambara ny ahiahiny i Wenxi Mom :
Ny herinandro lasa, tamin'ny 9 martsa 2011, olona dimy -telo avy any Shina kontinantaly ary roa avy any Hong Kong – no voasambotra noho ny ady momba ny ronono vovony ao Hong Kong .